September 18, 2020 – Voice of Myanmar
ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက် ( ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ)
ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက် ( ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ) ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းရိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၄ထောင်ကျော်ကူးစက်ခံရပြီး ၆၀ ကျော်သေဆုံးတဲ့ ကာလမှာ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ရတဲ့ ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာမှာ အခက်အခဲအများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် Voice Of Myanmar (VOM) သတင်းဌာနရဲ့ စတူရီယိုကို မဲဆွယ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက် အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး အွန်လိုင်းကနေ အစီအစဉ်တွေတင်ပေးခြင်းနဲ့ ကူညီပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။ ဒါမှသာ ပြည်သူအများ ကိုဗစ်၁၉ ပိုးကူးမယ့် အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကျမ္မာရေးဝန်ထမ်းတွေကို အကူညီပေးရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ VOM ကိုချိတ်ဆက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲကနေ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ(PPP) ရဲ့ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအေးကို၊ မဲဆန္ဒနယ်(၁) ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမျိုးမင်းထွန်း၊ မဲဆန္ဒနယ် ၂ ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ခင်မို့မို့အောင်တို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ #voiceofmyanmar #VOM #လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက် #ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ#PPP Zawgyi…
ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက် ၊ ဒေါ်သင်းသင်းသော် (ပြည်သူ့ပါတီ )
ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက် ၊ ဒေါ်သင်းသင်းသော် (ပြည်သူ့ပါတီ ) ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းရိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၄ထောင်ကျော်ကူးစက်ခံရပြီး ၆၀ ကျော်သေဆုံးတဲ့ ကာလမှာ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ရတဲ့ ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာမှာ အခက်အခဲအများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် Voice Of Myanmar (VOM) သတင်းဌာနရဲ့ စတူရီယိုကို မဲဆွယ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက် အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး အွန်လိုင်းကနေ အစီအစဉ်တွေတင်ပေးခြင်းနဲ့ ကူညီပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။ ဒါမှသာ ပြည်သူအများ ကိုဗစ်၁၉ ပိုးကူးမယ့် အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကျမ္မာရေးဝန်ထမ်းတွေကို အကူညီပေးရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ VOM ကိုချိတ်ဆက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲကနေ ပြည်သူ့ပါတီ (PP) ရဲ့ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်က မဲဆန္ဒနယ်(၁) ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်သင်းသင်းသော်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ #voiceofmyanmar #VOM #လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက် #ပြည်သူ့ပါတီ #PP Zawgyi ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမိတ္ဆက္ ၊ ေဒၚသင္းသင္းေသာ္ (ျပည္သူ႔ပါတီ ) ကိုဗစ္ဒုတိယလႈိင္း႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း…
စစ်တွေမြို့မှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့တဲ့အတွက် မြို့မရဲစခန်းကို လော့ခ်ဒေါင်းချ
စစ်တွေမြို့မှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့တဲ့အတွက် မြို့မရဲစခန်းကို လော့ခ်ဒေါင်းချ စစ်တွေ၊ စက်တင်ဘာ ၁၈- ၂၀၂၀ ထက်အောင်စိုင်း(VOM) စစ်တွေမြို့မှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့တဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိလာပြီး မြို့မအမှတ်(၁) ရဲစခန်း က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပိုးတွေ့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် ရဲစခန်းကို လော့ဒေါင်းချထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့နဲ့ မနေ့စက်တင်ဘာ၁၇ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းထဲမှာ စစ်တွေမြို့မရဲစခန်းက လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စစ်တွေမြို့မ အမှတ်(၁) ရဲစခန်းက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေအနေတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ စစ်တွေဆေးရုံအုပ်ကြီး (ညွှန်ကြားရေးမှူး) ဒေါက်တာဇော်လွင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့” လက်ရှိဆေးရုံမှာ ကိုဗစ် ၁၉ ပိုးတွေ့လူနာက (၂၀၀) လောက်ရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း တချို့တဝက်လောက်ပါတယ်။ စာရင်းကတော့ တချို့တဝက်ပါတာပေါ့။ တိတိကျကျကိုလည်း ဆရာတို့က သေချာပြန်ကြည့်မှရမှာလေနော်။ ပါတော့ပါတယ်…
အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ထိုင်ဝမ်ရောက်ရှိချိန် ကျွန်းအနီးမှာ တရုတ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်
အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ထိုင်ဝမ်ရောက်ရှိချိန် ကျွန်းအနီးမှာ တရုတ်စစ်ရေးလေ့ကျင့် ပေကျင်း၊ စက်တင်ဘာ-၁၈-၂၀၂၀ မျိုးဆက် (VOM) အမေရိကန်ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးနဲ့ ထိုင်ဝမ်တာဝန်ရှိသူတွေအကြား တိုင်ပေမှာ အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်တဲ့နေ့မှာပဲ ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားအနီးမှာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို တရုတ်နိုင်ငံက စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်မှာ စတင်လိုက်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ အခိုင်အမာဆိုထားတဲ့ ထိုင်ဝမ်နဲ့ အမေရိကန်တို့အကြား နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကို တရုတ်နိုင်ငံက ပြစ်တင်ရှုတ်ချနေခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်နဲ့ အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးကို နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကို တရုတ်နိုင်ငံက စောင့်ကြည့်နေပြီး ကျွန်းအနီးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်ကလည်း ဝေဟင်နဲ့ ပင်လယ်ပြင် အကြီးစားစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို နှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်တာတွေ အပါအဝင် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ တိုးမြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်မှာ စတင်ခဲ့တဲ့ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိပေမယ့် လေ့ကျင့်မှုကို ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားအနီးပြုလုပ်နေတာဖြစ်ကာ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ရဲ့ အရှေ့ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရန်ဂူချန်က ပြောပါတယ်။…
အုတ်ဖိုမြို့နယ်မှာ ပထမဦးဆုံး ကိုဗစ်လူနာ ၂ဦးတွေ့ ပြည် ၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈-၂၀၂၀ လပြည့် (VOM) ပဲခူးတိုင်း ၊ သာယာဝတီခရိုင် ၊ အုတ်ဖိုမြို့နယ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် COVID 19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ လူနာ ၂ ဦးကို ဒီကနေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အဲ့ဒီလူနာ၂ဦးကို ပြည်မြို့ ကုတင် ၅၀၀ ဆေးရုံကို လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီလူနာ ၂ဦးနဲ့ထိစပ်ခဲ့တဲ့သူ ၄၀ ကျော်ကို ကွာရန်တင်းဝင်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ “လူနာကတော့ ညနေ‌ ၄ နာရီမှပဲ case number သိရမယ်၊ ညနေ ၄ နာရီကျော်မှ သူတို့ထုတ်ပြန်မှပဲ case number မသိရသေးဘူး၊ ကျွန်တော်တို့က ညထဲကသိရတာလေ၊ လူနာနှစ်ယောက်ပါ၊ နံပါတ် ၁ က အမျိုးသားတစ်ယောက် ၅၁ နှစ် တိမ်မြုပ်ကျေးရွာမှနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့…
关于covid19 军方用的是士兵的捐款、The Union of Myanmar Economic Holdings Limited 和MEC的利润和中国的援助。
关于covid19 军方用的是士兵的捐款、The Union of Myanmar Economic Holdings Limited 和MEC的利润和中国的援助。 内比都2020年9月18日 Translate by LEI LEI WIN (VOM) 缅甸第二轮疫情的爆发，导致61人死亡和4299人感染COVID-19。所以正在对该国各地的数万人进行检测。 由于这些情况，很多卫生工作者和社会团体都在不分昼夜的工作。这个时候军队会做些什么呢？对于这方面有什么样的支持呢？为了解答这些疑问，VOM新闻社的TarTee记者提问了TatmadawInformationTeam 的主席Bogyoke Zaw Min Tun。 VOM- 首先，可以知道全缅甸被感染到新型冠状病毒的军队人数有多少吗？ ZMT-全国截止到昨天（2020年9月16日）有46名被感染。这里面有17位感染者是在第一轮的时候被感染的。第二轮的话有29位被感染，其中有士兵、退休的士兵和士兵的家庭成员。在这里，2020年9月17日有一位感染者去世，是Daw Khin Aye Myint中校（已退休）。年龄65岁，居住在Sanchaung。但是居住在外面。然后退役军人有权接受军队的医疗。她好像疑似有covid 19在军队医疗医治的时候去世的。 VOM- 在隔离中和已经隔离好的，士兵人数有多少？ ZTM- 关于这个究竟有多少不是很清楚。因为相关的人员还有被疑似有病毒的人员，他们都会被隔离。 VOM- 军队的隔离中央的数量一共有多少？ ZTM- 军队隔离中央的数量在全国一共有16个。 VOM- 在这个中央里面，有多少人在隔离？里面是民众吗？还是士兵的家庭成员吗？ ZTM-在仰光省的Hlaing区，我就不说关于士兵进去的人数一共有多少了。被隔离的民众，在仰光省的有1080名、曼德勒省有86名、内比都有7020名、Shwe Nyaung有90名、景东有144、东北地区军事总部腊戌有800名、Mawlamyine有700名、Myeik有120名、Kawthaung有40名、Monywa有30名、Toungoo有80名、Kholan有80名。16个地区民众一共有9550名为他们准备好优先服务。在仰光省的Hlaing区已经有3000多名已经隔离好。在内比都人数大概也是这么多已经隔离好了。 VOM- 疫情防御费用有军队支付，还是由联邦支付？ ZTM- 这些支付的成本不是由军事预算使用的。而是使用从士兵一天的捐献、一个月捐献中使用。在某些情况下，也会用到缅甸联合经济控股有限公司（The Union of Myanmar Economic Holdings Limited ）和缅甸经济公司（Myanmar…
Chinese, Interview, သတင်းLeaveacomment
သီပေါ-နမ့်လန်ကားလမ်းဘေးမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ စွန့်ပစ်အလောင်းတွေ့
သီပေါ-နမ့်လန်ကားလမ်းဘေးမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ စွန့်ပစ်အလောင်းတွေ့ နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၁၈-၂၀၂၀ ကောင်းလက်ျာ(VOM) ရှမ်းပြည်နယ်၊ သီပေါမြို့နယ် ၊ သီပေါ- နမ့်လန် လမ်းပေါ်က နမ့်ပုပ္ပရွာအကျော်မှာ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက သေနတ်ဒဏ်ရာနှစ်ချက်နဲ့သေဆုံးနေတဲ့ ‌အလောင်းတစ်လောင်းကို လာရောက်စွန့်ပစ်ထားတယ်လို့ သီပေါမြို့နယ် နယ်စည်းမခြားပရဟိတအဖွဲ့မှကိုသျှားထက်ပိုင်က ပြောပါတယ်။ “အလောင်းက ပိုင်ရှင်ပေါ်တယ် ။‌နောင်အန်ဘက်က ကိုစိုင်းညီညီလို့သိရတယ်၊ လူလတ်ပိုင်းအရွယ် အမျိုးသားပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးလကလည်း ဟိုမုံးရွာနားမှာ အလောင်းသုံးလောင်း သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံးနေတာ တွေ့ခဲ့သေးတယ်”လို့ ကိုသျှားထက်ပိုင်က ပြောပါတယ်။ သေဆုံးသူ ဦးစိုင်းညီညီကိုရဲ့ လက်ပြင်နေရာနဲ့ ဝဲဘက်ရင်အုံမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာ ၂ ချက်နဲ့ သေဆုံးနေတာဖြစ်ပြီး အလောင်းကို သီပေါဆေးရုံကြီး ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ သီပေါမြို့နယ်အနီး ကျေးရွာအချို့နားမှာ မကြာခဏ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးနေသူတွေကို လာရောက်စွန့်ပစ်လေ့ရှိပြီး ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာလည်း အမျိုးသား ၃ဦး၊…
ကိုဗစ်လူနာ ၉ဦးတွေ့တဲ့ ဘီလင်း အမှတ်-၂၂ တာယာစက်ရုံကို ယာယီပိတ်၊ ကန့်သတ်နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ် ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ၁၈-၂၀၂၀ အေးချမ်းသူ(VOM) မွန်ပြည်နယ်၊ ဘီလင်းမြို့နယ်ရှိ အမှတ်-၂၂ တာယာစက်ရုံမှာ ကိုဗစ်လူနာ ၉ဦးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့် စက်ရုံကိုယာယီပိတ်ထားပြီး စက်ရုံရှိအလုပ်သမားအားလုံး ကွာရန်တင်းထားရှိသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင် စက်ရုံကို ကန့်သတ်နယ်မြေအဖြစ်ကန့်သတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာခင်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်။ ဝန်ထမ်းအင်အား ၆၀၀ခန့်ရှိတဲ့ အဲ့ဒီတာယာစက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်သမားတစ်ဦးဟာ စက်တင်ဘာ ၁၄ရက်က အနံ့မရရှိတဲ့အတွက် အသွားအလာကန့်သတ်ပြီး ဓာတ်ခွဲနမူရယူစစ်ဆေးခဲ့ရာ စက်တင်ဘာ ၁၆ရက်နေ့မှာ ကိုဗစ်ရောဂါးပိုးတွေ့ရှိတယ်လို့ အဖြေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့တဲ့အလုပ်သမားနဲ့ ထိတွေ့ဆက်စပ်ခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်း ၁၈ဦးကို အသွားအလာကန့်သတ်ပြီး ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူစစ်ဆေးခဲ့ရာမှာတော အလုပ်သမား ၈ဦးမှာ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာခင်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်။ ” ဒီနေ့မနက်မှာ Positive ၉ဦး( စက်ရုံဝန်ထမ်း ၈ဦးပါ) ထပ်တွေ့တော့ လက်ရှိအခြေအနေအရ တာယာစက်ရုံကို အသွားအလာ အဝင်အထွက် ကန့်သတ်လိုက်ပြီးတော့…
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းက လူတစ်သောင်းကျော် နောက်၂ရက်နေရင် စားနပ်ရိက္ခာပြတ်ပြီ
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းက လူတစ်သောင်းကျော် နောက်၂ရက်နေရင် စားနပ်ရိက္ခာပြတ်ပြီ ပက်လက်၀ ၊ စက်တင်ဘာ ၁၈ ၊ ၂၀၂၀ ကိုတိုးကြီး (VOM) ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ချင်းပြည်နယ်တောင်းပိုင်းမှာ တပ်မတော်နဲ့ အေအေ တို့အကြား မကြာခဏ စစ်ရေးထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားပြီး ဒေသခံ ပြည်သူတစ်သောင်းကျော် နေရပ်စွန့်ခွာခဲ့တဲ့အတွက် ပက်လက်ဝမြို့နယ်ထဲက တိုက်ပွဲရှောင် (IDPs Camp ) စခန်း လေးနေရာမှာ အသီးသီး ခိုးလှုံနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းတွေဆီကို စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ ကူညီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ပေးတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေဟာ စက်တင်ဘာ ၁၁ရက်ကစပြီး ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါနဲ့ လုံခြုံရေး အခြေအနေတွေရ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်တော်မြို့နယ်ဘက်မှာ လမ်းပိတ်ထားတဲ့အတွက် တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းတွေဆီကို ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေ အချိန်မှီမရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ။ “ ဒီလ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်ဆိုရင် WRP က ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့…
ကိုဗစ် ၁၉နဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်ကလုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာ တပ်မတော်သားတွေရဲ့အလှူငွေ ၊ ဦးပိုင် (MEC) အမြတ်ငွေနဲ့ တရုတ်ရဲ့ အကူအညီတွေကိုသာ သုံးစွဲတာသာဖြစ်
ကိုဗစ် ၁၉နဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်ကလုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာ တပ်မတော်သားတွေရဲ့အလှူငွေ ၊ ဦးပိုင် (MEC)အမြတ်ငွေနဲ့ တရုတ်ရဲ့ အကူအညီတွေကိုသာ သုံးစွဲတာသာဖြစ် နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၈-၂၀၂၀ တာတီး (VOM) မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်၁၉ရောဂါ ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်လို့ ၆၁ယောက် သေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၄၂၉၉ဦး ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ကာ သူတို့နဲ့ထိတွေ့မိလို့ သောင်းချီတဲ့ဒေသအသီးသီးကသူတွေဟာ စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ် စစ်ဆေးမှုခံနေရပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကြောင့် အရပ်ဘက်ကျမ္မာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့တွေ နေ့မအားညမနား မနိုင်ဝန်ထမ်းနေချိန် တပ်မတော်ကရော ဘာတွေလုပ်ပေးနေသလဲ ? ဘယ်လိုတွေထောက်ပံ့ပေးတာတွေရှိသလဲ ? ဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို ဗီအိုအမ်သတင်းထောက် တာတီးက သီးသန့်မေးမြန်းထားပါတယ်။ VOM- ဗိုလ်ချုပ်ခင်မျာ့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိထားတဲ့ တပ်မတော်သားအရေအတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်လောက်ရှိလဲသိပါရစေ။ ZMT-တစ်​နိုင်​ငံလုံးမ​နေ့ကအထိ.၁၆.၉.၂၀၂၀အထိ(၄၆)​ယေက်​ရှိပါတယ်​၊အဲဒီအထဲက၁၇​ယောက်​သည်​ပထမအသုတ်​ကပါ၊ ဒုတိယအသုတ်မှာ​တော့၂၉​ယောက်​ပါ၊ဒုတိယအသုတ် ၂၉​ယောက်​မှာတပ်​မ​တော်​သား​တွေ​ရောအငြိမ်းစား​တွေ​ရောတပ်​မ​တော်​သားမိသားစု​ဝင်တွေရော ပါပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ၁၇.၉.၂၀၂၀.ရက်​နေ့မှာ တစ်​ယောက်​ဆုံးပါးပါတယ်။ ဆရာမကြီး​ဒေါ်ခင်​အေးမြင့်​ဒုတိယဗိုလ်​မှူးကြီး(ငြိမ်း)ပါ။…
Interview, သတင်းLeaveacomment